ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: အသည်းလေး. . . ကျန်းမာစေဖို့
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, February 28, 2010
ကိုလူထွေး February 28, 2010 at 2:45 PM
အရက် ဘီယာကို အလွန်အကျူး မသောက်ကြစေဖို့လည်း သတိပေးအုံးလေ...
kokomaung.uk February 28, 2010 at 5:11 PM
သတိပေးဆောင်းပါးလေးအတွက် ကျေးဇူးဘဲ သယ်ရင်းရေ...
တစ်ခါတစ်ခါ ညာဘက်ဗိုက်နံရံနာဖူးတယ်။ လေကြောင့်ဘဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တစ်ရက်လောက်ကြာပြီးရင် ပျောက်သွားတတ်တယ်။
အခု ဒီပို့စ်လေးဖတ်မိမှဘဲ ပိုလန့်လာသလိုဖြစ်လာပြီ။ ပိုပြီးကျန်းမာရေးအတွက် ဆင်ခြင်ရတော့မယ်။
ဇွန်မ February 28, 2010 at 9:11 PM
အမရေ ကျန်းမာရေးအတွက် ဖတ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါပဲ မျှဝေပေးတော့ ကြိုတင်သတိထားနိုင်တာပေါ့နော်
နန်း March 1, 2010 at 12:31 AM
လင်းကြယ်ဖြူ March 1, 2010 at 3:33 AM
ဒီနေ့ ကစပြီး ...ကိုယ့် အသည်းလေး ကို
တအား ဂရု စိုက်ပါတော့မယ်...(Liver)ကိုပြောတာ
Anonymous March 1, 2010 at 3:51 AM
အသိစောခဲ့ရင် ကျုပ်အသည်းလေး ကောင်းဦးမှာ
ခုတော့ နောက်ကျသွားပြီ ဒေါ်စပယ်ပွင့်ဖြူရေ
vanko March 3, 2010 at 11:12 PM
အင်း... အသည်းလေးကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရတော့မှာပေါ့လေ။ အခုလို ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့... ကြက်အသည်းတို့ ဝက်အသည်းတို့ စားတဲ့လူတွေရောဟင်.. ရောဂါပိုးတွေ ပါမလာနိုင်ဘူးလား?
မေကျော် March 4, 2010 at 3:44 PM
အသည်းလေး ကျန်းမာဖို့ လိုတယ်